धारणस्थित बिपी प्रतिष्ठानमा थप दुई सङ्क्रमितको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार १२:३८
प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार ती महिला यही असोज २४ गते प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएकी थिइन् । सोही दिन उनलाई कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको थियो । उनी मधुमेहको बिमारी भएको बताइएको छ ।
यता ३७ वर्षीय युवकलाई भने असोज २१ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । मङ्गलबार अपराह्न मात्र उनलाई प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो । कुनै दीर्घरोग नभएका ती युवकलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर अस्पताल ल्याइएको सहप्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उनको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यससँगै प्रतिष्ठानमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुगेको छ ।
धनगढीमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा तीन जना घाइते
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक शुक्रबार बस्ने
महादेवलाई धोका दिएर को सँग गरिन् बलिउड अभिनेत्री मौनी रोयले इंगेजमेन्ट ?
नेपालगञ्जमा २९ लाखसहित १० जुवाडे पक्राउ
कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो
Categories Select Category Auto (483) Blog (3) English (1,148) Entertainment (577) Finance (1,084) Nepali (11,976) Sports (7,945) Tech (2,089) World (3,962)